Habka Samayska Cuntada - Wikipedia
Habka Samayska Cuntada
Habka Samayska Cuntada (Qaamuuska Af-Soomaaliga 2012: Footoosintasis; Ingiriis: Photosynthesis) Dhirtu waa noolaha kali ah ee cuntadiisa diyaarsada ayagoo isticmaalaya nidaam loo yaqaano Habka Samayska Cuntada.
Geedku wuxuu u baahan yahay ileys - inta badan ileyska dabiiciga ah ee qoraxda, biyo ay xididadu ka soo nuugaan dhulka iyo hawo - gaar ahaan kaarboon-labo-ogsaydh (C2O) si uu u samaysto cunto asagoo isticmaalaya Habka Samayska cuntooyinka
Inta u badan dhirta, habka samayska cuntada ee geedku wuxuu ka dhex dhacaa caleemaha iyo laamaha geedka, halkaas oo biyaha, awooda ileyska iyo [[kaarboon|kaarboon-labo-ogsaydh]ku ku falgalaan. Isku dhiska halkaas ka dhaca waxaa ka soo baxa Ogsajiin caleemuhu cirka ku sii daayaan. Taasi oo ah faa'iidada koowaad ee dhirtu u leedahay deegaanka dhulka.
Habkan cunto samayska dhirtu wuxuu dhacaa wakhtiga maalintii sababtoo ah iftiinka falaadhaha qoraxda waa lagama maarmaan. Sidoo kale, habkani waxaa lagu sameeyn karaa nidaam loo yaqaano greenhouse oo iftiin fiican siin kara geedka.
Habka samayska cuntada dhirta waa deeqaha koowaad ee Ogsajiinta ku dara hawoda. Markasta oo geedku cunto sameeysto ogsajiin ayuu sii daayaa, taasi oo dadka iyo xayawaanka kale neefsadaan.
Qorraxdu waxay geedaha siisaa awoodda ay ku soo saaraan caleemo, ubax, khudaar, midho iyo abuur…
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Habka_Samayska_Cuntada&oldid=219521"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:28.